Efa-dahy no voasambotry ny polisy avy ao Antaninandro ny alarobia 16 oktobra 2019 lasa teo nandritra ny fisafoana izay natao teny Ambatomaro. Nandalo tamin’ireo faritra fantatra fa fifohana rongony eny an-toerana ny polisy ny alarobia tokony ho tamin’ny 7 ora hariva. Tamin’izay indrindra izy ireo no nifanehatra tamina tovolahy maromaro teo am-pifohana rongony. Nisy ny fifanenjehana ka 2 lahy no voasambotra. Nokarohina ireo namany ka 2 lahy hafa no voasambotra tsy lavitra teo. Nandritra ny fisavana dia mbola nahenoana fofona rongony sy fonosana rongony iray tamin’izy ireo. Niaiky ny helony avokoa izy efa-dahy ireo. Natolotra ny fampanoavana omaly alakamisy 17 oktobra 2019 ny raharaha.